Cali Cosoble “Amni darada ka jirta Wadada Muqdisho iyo Jowhar waa dayac sal ku leh arrimo siyaasadeed” | Jowhar Somali news Leader
Home News Cali Cosoble “Amni darada ka jirta Wadada Muqdisho iyo Jowhar waa dayac...
Cali Cosoble “Amni darada ka jirta Wadada Muqdisho iyo Jowhar waa dayac sal ku leh arrimo siyaasadeed”
Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa ku tilmaamay amni darri ka jirta wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar inay tahay dayac sal ku leh arrimo siyaasadeed.
Cali Cabdulahi Madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa sheegay in madaxda maamulka Hirshabelle ay ka leeyihiin dano gaar ah oo ay doonayaan inaan la marin wadada.
“Xildhibaannada waxaa la isugu duwaa Kontan-meeyo, waliba waa la kala xushaa, waxa ay sugaan diyaaradda markaas u kireysan Madaxweynaha iyo ku xigeenka Hir-Shabeelle, sababtu waa caburin siyaasadeed iyo dano gaar ah oo laga leeyahay arrintaas, hadda Muqdisho ayay ku xanniban yihiin oo ay joogaan Xildhibaanno badan” ayuu yiri Cali Cabdulaahi Cosoble.
Cali Cabdulaahi Cosoble Madaxweynihii hore ee Hir-Shabeelle ayaa xusay in intii uu shaqada baneenay in Xildhibaannada, Mas’uuliyiinta iyo waaxyaha kala duwan ee Maamulka si maalinle ah ay u isticmaalayeen wadada iyaga oo aan cabsi iyo culeys la kulmeen.
Dhowaan ayaa waxaa lagala degey baabuur ku sii jeeday magaalada Muqdisho mid kamid ah xildhibaanada Hirshabelle isagoo kadibna ay dileen dagaalamayaasha Alshabaab.
Madaxda ugu sareysa dowlada goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay haatan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyagoo xilliga ay dib ugu soo laabanayaan magaalada Jowhar oo u jirta Muqdisho 90 km ay ku safraan diyaarad.